लोकप्रिय गायिका देविकाको पहिलो पारिश्रमिक कति थियो ?
जनतापाटी २३ पुस ।
काठमाडौं । लोकप्रिय गायिका देविका बन्दनाले वि.सं. २०५० सालमा चलचित्रको पहिलो गीत गाइन् । चलचित्र थियो,–कस्तुरी । गीत थियो,–तिमीलाई मेरो आँखामा’ । नायिका करिष्मा मानन्धरले अभिनय गरेको चलचित्रको उक्त गीत एभरेज भयो । देविकाले ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाइन् । त्यो समय उक्त पारिश्रमिक आकर्षक थियो ।
“त्यो बेला भारतीय गायक गायिकालाई चलचित्रको गीत गाउन लगाउने चलन थियो । उनीहरु महंगो पारिश्रमिक लिन्थे,” देविका भन्छिन्, “त्यसैले उनीहरुलाई दिइने पारिश्रमिकको तुलनामा ५ हजार रुपैयाँ निकै कम हो ।
तर पनि त्यो बेला हाम्रा लागि भने ५ हजार ठूलो रकम थियो ।” त्यो गीत देविकाले कलकोत्ता गएर रेकर्ड गराएकी थिइन् । चलचित्रका निर्माता विनोद मानन्धर थिए ।
चलचित्र माइलीको गीत ‘भरे आउँछ सपनीमा पर्खी बस है’ देवीकाले गाइन् । ०५६ सालमा आएको यो गीत निकै हिट भयो । यसपछि रमाइला हुन् या सेन्टिमेन्टल सबै प्रकारका गीतमा देविकाले स्वर भरिन् । यस्तो समय आयो प्रायः अधिकांस चलचित्रमा उनको स्वरमा गीत हुन्थे ।
“करिब एक सय वटा चलचित्रमा गीत गाएँ,” उनी भन्छिन्, “सबै प्रकारका गीतमा मैले स्वर दिएको छु ।” अच्छा लेकिन लण्डनको’, ‘सुनसुन सनम’, ‘तलतल तलतल’, ‘बेसीमा मैच्याङ’, ‘भरे आउँछु सपनीमा’, ‘हे संगीता’ लगायतका चर्चित गीत देविकाले गाइन् । उनले संगीतकार तथा गायक सम्भूजीत वास्कोटासँग धेरै सहकार्य गरेकी छन् ।
अहिले भने करिब एक दशकदेखि चलचित्रका गीत गाएकी छैनन् । “अफर त अहिले पनि आउँछ । तर समय अभावका कारण गाउन सकेको छैन,” देविका भन्छिन्, “अहिलेका लोक फ्लेबरका चलचित्रका गीत पनि मलाई मन पर्छ । राम्रो भइरहेको छ ।”
देविकाले दुईवटा हिन्दी गीत ‘अब दिल जरा जरा’ र ‘बस तेरा नाम’ गाइन् । अर्को एउटा गीत आउने तयारीमा छ । ‘अब दिल जरा जरा’ भारतीय चर्चित अवार्ड ‘मिर्ची म्युजिक अवार्ड’मा नोमोनेसनमा परेको छ ।